Carreer nke Cisco Engineers na-adabere kpamkpam na CCNA Asambodo - ITS
Carreer nke Cisco Engineers na-adabere kpam kpam na CCNA Asambodo
Cisco Engineers 'Careers Depending On Evolution of CCNA Certification
Ọhụụ ọhụrụ Cisco ASA
Ulo oru IT na-aga n'ihu mgbe niile na-agbanwe agbanwe na mgbanwe ndị na-eme ka ọ dị mkpa maka ikike ọhụrụ. Ngosipụta nke mgbanwe dị iche iche na usoro Cisco nke usoro nhazi nke Cisco bụ nke a na-ele anya dị ka nhazi iji dozie ọzụzụ na mgbanwe kọmputa nke kachasị na-emetụta ọrụ IT.
Ụlọ ọrụ IT dị na njedebe dị njọ nke mgbasa ozi kọmputa. Ugbu a, Cisco ewetawo mgbanwe n'ọgba akwụkwọ ya kachasị ya na ya, usoro ọzụzụ CCNA maka Ntugharị na Nwegharị. Na mbụ, e gosipụtara ndị nchọnchọ ihe dịka ọkwa, dịka ọmụmaatụ, nhazi nke ngwaọrụ, ilekọta ngwaọrụ, melite ngwanrọ, ịkwalite mmezi na ihe ndị ọzọ. Usoro ngwaọrụ site na ngwaọrụ iji chekwaa netwọk bụ ihe gara aga na ihe kpatara na oge kọmputa nke oge a na-eme ka usoro a mee ngwa ngwa. N'ụzọ dị otú a, a chọrọ mgbanwe ole na ole n'ime ọzụzụ gara aga na-eburu n'uche ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ bụ ime ka ọ baa uru karị maka ndị injinia taa.
Ụzọ ị ga-esi na-arụ ọrụ na oge dị elu abụghị ịmepụta ọsọ ọsọ dịka ọ ga-agbakwunye na blunders. Mkpakasị mmadụ nwere ike ime ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-eme ngwa ngwa, ọ ga-enwetakwu oge ọ na-atụghị anya ya. Nchịkọta CCNA a gbanwere na-emesi ike na ikike ndị dị mkpa iji merie netwọk kama ikwe ndokwa ngwaọrụ ebe ọ bụ na ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ndị a mara na nke ahụ bụ ugbu a.
Usoro ohuru a na-elekwasị anya na ihe dị mkpa nke netwọk programmable, ụdị dịgasị iche iche nke njikwa na ngwa ngwa nwere ike ịnweta SDNs. Achọghị akara CCNA ka a gbanwee ndị ọrụ Cisco n'ime ndị mmemme ma kama na-atụ anya inyere ha aka ịghọta ihe dị mkpa. Ọ na-ekwusi ike na ị na-ewere igwe ojii na igwe ọrụ na-arụ ọrụ na netwọk. Ntughari nka dika ikeputa ihe na sayensi sayensi bu ihe Cisco ASA ndi ozo kwesiri ime ka ha chee echiche. Ndị engineer Cisco kwesịrị ịbụ ndị gụrụ akwụkwọ na mpaghara ọhụụ ọhụrụ ma chọpụta ndị nkuzi ọzụzụ nke mere ka usoro mmemme ha dị ọhụrụ.
N'iburu n'uche ihe omumu ohuru ohuru ahu, o bu ihe di mkpa maka ndi na-enye ndi oru ozuzu iji mezuo onwe ha dika ndi di iche iche di ugbu a. N'otu aka ahụ, ọ dị oké mkpa maka ndị injinia iji nweta ume ha na usoro CCNA ọhụrụ nwere ike ijikwa ndị mmadụ n'ụzọ ziri ezi.